Thomas Muller lama ciyaari kartid 14 laacib adigoo ah 10 laacib kaliyah.
Sunday, June 24th, 2018 - 17:49:28
Wednesday April 19, 2017 - 17:05:20 in Wararka by Ak Caqil
Arbaco--Munich. Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich ayaa sheegay in Kooxdiisa laga hiiliye xalay.
Thomos Muller ayaa ku tufay Garsoore Viktor Kassai iyo caawiyaashiisa kadib markii sida la yaabka laheed kaga hartay Bayern Munich Koobka Champions League kadib guuldaro buuq dhalisay ay kaga timid Real Madrid.
Muller ayaa dhahay "Ciyaartu waxay u dhaxeeyso ciyaartooy 10 ah iyo 14 laacib"
Waxaa uu ujeedkiisa ahaa in Garsoore Viktor Kassai iyo calanwadayaashiisa ay galeen qaladaad badan. "Waxaan aheen kuwo ku jiro xaalad fiican niyad ahaan xitaa markii aan 10-ka laacib noqonay oo ciyaarta ay wali 2-1 aheed, balse markii 2-2 laga dhigay oo gool offside ah dhashay niyada ayaa naga dhimatay".
Muller ayaa wax laga weeydiiye casaankii la siiye Vidal waxaa uu dhahay waan la soconaa kubadaas waxii ay aheed. Runtii mar hore ayuu lahaa Kaarkaas balse kubadaas marnaba m aheen kubad foul ah waa sida uu u sheegay Muller saxaafada maanta markii ah Munchen tageen.